Home Wararka Itoobiya oo ceelal shidaal oo cusub ka qodi doonta deegaanka Soomaalida
Itoobiya oo ceelal shidaal oo cusub ka qodi doonta deegaanka Soomaalida
Dowlada Itoobiya ayaa markale ku baaqday in ay shidaal cusub ka heshay dhulka Soomaalida. Agaasimaha waaxda maamulka iyo laysimadda Batroolka ee wasaaradda macdanta, shidaalka iyo khayraadka dabiiciga ee dalka Itoobiya Ketsela Tadese ayaa sheegay inay u baahan yihiin 3 sano oo dheeraad ah si ay u horumariyaan khayraadka Batroolka ee deegaanada is maamulka Soomaalida ku nool bariga dalkaasi.
Agaasime Ketsela Tadese oo isagoo la hadlayey Wakaalladda Wararka Etthiopia News Agency (ENA) waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay talaabooyin dheer si loo dhamaystiro ka hor inta aan la gelin hawlaha wax soo saarka ee shidaalka Ethiopia.Ketsela Tadese waxa uu xusay in qodista boqolaal ceelal shidaal oo dheeraad ah ay muhiim u yihiin horumarinta tasiilaadka adeegyada asaasiga si loo horumariyo sahminta khayraadka.
Dowlada Itoobiya ayaa horaantii sanadkaan bilaawday dhoofinta shidaalka taas oo ay ka rajaynayo in dhaqaale badan ka soo galo dowlada dhere.
Previous articleQaar ka mida Xildhibaanada ka noqday mooshinka Farmaajo oo laga mamnuucay Baydhabo (Video)
Next articleFaysal C. Waraabe oo eedayn u soo jeediyay Boqor Burhaan
Qarax goordhaw ka dhacay magalaada Muqadisho iyo qasaare ka dhashay
Rag ku eedeysanayeen ineey qeyb ka ahayeen weerarkii wastgate mall oo...